Costa Rica : Fampirantiana seza, afisy, jiro · Global Voices teny Malagasy
Manondrana ny talenta artistikany amin'ny resaka fanaingoana i Espaina
Voadika ny 28 Aogositra 2020 13:24 GMT
Angona seza, afisy sy jiro marobe mahafinaritra no naranty tamin'ny Jona 2009 tao amin'ny Tranombakoky ny Zavakanto Maoderina sy ny Famoronana Endrika [ amin'ny fiteny espaniôla] ao San José, Costa Rica. Hita tao anatin'ireo zavakanto espaniôla niisa 300 ireo ny asan'ireo anarana goavan'ny tantaran'ny zavakanto eorôpeàna, niaraka tamin'ny asan'ireo artista espaniôla nisy ny sonian'i Picasso, Gaudí, Miró, Dalí, Tusquets, Mariscal, Moneo sy Hayón, ankoatra ireo maro hafa. Nahasarika ny sain'ireo bilaogera tao Costa Rica ity fampirantiana mifindrafindra toerana ity, nomena anarana hoe “Famoronana 300% Espaniôla”.
Tao amin'ny bilaoginy Arquitecturas [esp.] momba ny taotrano i Dario Alvarez dia niteny momba ilay fampirantiana:
Jose Pablo sy Manuel avy ao amin'ny bilaogy Sorry Zorrito indray liana fatratra hahalala ny momba ity fampirantiana ity:
Tao Costa Rica, naranty tany amin'ireo efitranona tranombakoka rehetra izy hatramin'ny 12 Jolay. Ny iray tamin'ireo mpanohana ara-bola, ny Orinasam-panjakana ho an'ny hetsika ara-kolontsaina any ivelany (SEACEX, fanafohezana avy amin'ny teny espaniôla) dia manolotra fitsidihana virtoaly miaraka amina sary sy fampahafantarana ireo entana rehetra. Fanampin'izay, azo arahana ihany koa ao amin'ny Twitter ilay tranombakoka.